Kwatingaona Maodzanyemba ekuSweden muSweden
Ndeipi nzvimbo dzakanakisisa dzekuona nhatu dzekumusoro dziri kuSweden?
Nzvimbo dzeNyakasi Mwenje iyi inowanzoonekwa mune dzimwe nyika dziri pedyo neActic Circle uye inorara munharaunda inozivikanwa seAuroral Oval. Sweden iri pane imwe yenyika idzo dzinoratidzira ruvara rune mavara mumatenga ayo. MuSweden, nhatu dzeNorth Lights dzinowanzoonekwa mumwedzi yechando, asi dzinogona kuonekwa pakutanga.
Kune avo vane mwoyo yakashinga vanoda kumira usiku hwechando hweusiku, heino dzimwe nzvimbo dzakanakisisa dzekutarisa izvi zvisikwa zvitsva zvinoratidzwa muSweden .
Abisko National Park: Makiromita anenge makiromita kuchamhembe kweKiruna, iyi ndiyo nzvimbo inotarisa kuona Northern Lights. Chikamu chekudenga pamusoro peGungwa reTornetrask, rinozivikanwa zvikuru seBlue Hole, rinopa Abisko National Park mamiriro ayo ega akasiyana uyewo nzvimbo yakakwana yekubata magetsi. Pamwe pamwe nerwendo rwakatungamirirwa, musasa wekudzokera kumashure uye kufamba mumapaki, vafambi vanogonawo kutora zvigaro zvavo kusvikira kuA Aurora Sky Station uye vanoona magetsi aya anokwanisa kugara chero nguva kubva pamaminitsi mashomanana kusvika maawa akawanda. Nzira yekuenda seiko? Scandinavian Airlines (SAS) ine zororo dzese zuva rimwe nerimwe pakati peKiruna neStockholm Arlanda. Tarisa bhazi kubva ipapo kuenda kuAbisko. Kana ukasarudza chitima, ipapo STF Abisko Mountain Station ine motokari yake, "Abisko Turiststation". STF Abisko Mountain Station iri mamiriyoni zana kumadokero kweKiruna uye inosvika nyore nyore nemotokari kubva kuEurope nzira E10.
Jukkasjarvi uye Torne Valley: Musha weJukkasjarvi hausi kungozvikudza nehotera yayo yakagadzirwa nechando, inovakwa gore negore kubva kuTrans River inonaya, asi zvakare nokuti ndiyo imwe yenharaunda dzakanakisisa kuti uone zvishoma zveNorth Lights. Iyi ICEHOTEL inonyatsozivikanwa kuronga kutungamira kunotungamirirwa kunotora vatashanyi varo kuEsrange Space Center iyo maminitsi makumi matatu kubva kuKiruna.
Pano iwe unogona kudya mumusasa wako musango uchifadzwa nezvitsvuku, zvitsvuku, zvitubu nezvitsvuku zvinopenya pamusoro pako. Guta reTorne Valley rinosanganisira Lake Poustijarvi, uye misha yakapoteredza ye Nikkaluokta neVittangi, inzvimbo yakanakisisa yekuona auroras. Makambani mazhinji akachengetedza makadhi akadzinga imbwa uye mazai echando mumusiku unogona kutora iwe musango kuti uone zvakakwana zveNorth Lights. Nzira yekuenda seiko? SAS uye Norwegian vanopa ndege dziri pakati peStockholm neKiruna. Jukkasjarvi iri makiromita anenge 17 kubva kuKiruna, anenge makiromita anenge 15 kubva kuChiruna Airport. Kana uri kufamba nemotokari, famba uchienda kuLulea pane E10 uye tora kana iwe ukasvika kuchiratidzo chinonzi ICEHOTEL / Jukkasjarvi.
Porjus naLaponia: Porjus musha muduku uye une vanhu vanenge 400 chete. Inowanikwa pamakiromita anenge 60 kubva kuArctic Circle, musha uyu uri panzvimbo yeUnited World Heritage yeLaponia. Porjus iri pedo nemapaki akawanda enyika; Padeljant, Muddus, uye Stora Sjofallet. Mazuva akawanda akajeka, kusvibiswa kuduku uye zero degrees Celsius temperature, inoita Porjus nzvimbo inodikamwa zvikuru kuona Northern Lights. Nzira yekuenda seiko? Kubhururuka kubva kuKiruna kusvika kuPorjus inotora anenge maminitsi gumi nemaviri uye iyo mazano anopiwa neSAS Airlines.
Zvisinei, inosvika pamugwagwa. Kubva kuKiruna, iri maawa maviri nemaminiti makumi matatu motokari yePojus.
Dzimwe Mharaunda: Kana mamiriro okunze ari akanaka, saka magetsi aya anogona kuonekwa kubva kune imwe nzvimbo mukati memakungwa neArctic Sweden. Maguta makuru akadai seLulea, Jokkmokk neGallivare vanoita mabasa akasiyana-siyana echando uye Northern Northern Lights vari pakati pavo. MuLulea, vanhu vanogona kupinda kumapoteredza eBrado, kure neguta rechiedza uye ruzha rwekunakidzwa neusiku pasi pechiedza chechisiki.
Iko kunewo zvirongwa zvevanhu kuti vatyaire motokari yegodhi kusvika kumusoro wegomo weDundret muGallivare nokuda kwechiedza chekuvhenekera pachenyu kuti uone magetsi aya achizorora mumusi wechando.
Nzira yekuenda seiko? Kune zvikepe zvemavhiki matatu kubva kuKiruna kusvika kuLulea zvinotora anenge 23 maminitsi. Chitima chinotora maawa matatu nemaminitsi makumi mana uye kana iwe ukatora mumugwagwa zvino zvinotora maawa mashanu.
SAS ine ndege dzezuva nezuva kubva Kiruna kuenda kuGallivare. Nhandare yeGallivare inozivikanwa neLapland yendege uye iri pamaminitsi gumi nemodhini motokari kubva muguta.
Kunaka kwepanyika kunoshamisa kunotitorera isu nekushamisika, sekufanana neNyika dzeNyika dzekuNorth muSweden dzinoita kuvateereri vavo. Asi yeuka - kana iwe ukazowana mukana wekuona Mahombekombe eNyakadzi uri munhu, usaimba nziyo uchiri kuona. Maererano nezvakaitika kare zveSweden, zvinounza iwe nhamo!
Nyika yedu yepasi ndiyo imwe yemhando dzayo mune yose yezuva. Kwete nokuti inotsigira hupenyu, asi zvakare nekuda kwehuta-kudonha runako iyo ine. Nyika yedu izere nekunakisa uye inoratidza kusiyana kwakasiyana-siyana. Chimwe chezvinhu zvakajeka uye zvinoshamisa zvekunaka zvinoratidzwa muNorth Lights. Scientifically inozivikanwa seA Aurora Borealis, unhu hwakanaka hwezvinhu zvakasikwa hunokonzerwa nekukanganiswa kwezvikamu zveatomu neatomu munzvimbo yakakwirira yepamhepo.
15 Zvinhu Zvisingafaniri Kuita Apo Unofamba kuSweden
A Mafambiro Ekufambisa kune Island of Gotland
Maguta Akanakisa muSweden
A Kutungamira kuEland Island
Tsika Mazano Okuita Bhizinesi kuSweden
Nhoroondo Pfupfupi yeShaolin Temple
Nzvimbo 10 dzepamusoro dzekutora Martini muTampa
7 Maguta Makuru eMemphis eBhuku reBhuku reKubata
Kwatingawana Chikoro cheku Chile kuAlbuquerque
5 Zvinhu Zvikuru Zvokuita muParis paMvura Inonaya
Kuita Utsinye Kunogona Kuita Sei Kufambisa Inishuwarenzi Yenyu
Kufamba Kwenyika Ye Tu Duc Royal Tomb, Hue, Vietnam
Nzira Yokuwana Mangwanani Esiku NaJimmy Fallon Makatiti
Memphis Parks uye Zvipo
Mazano Ebhizimisi Kuenda kuChina neHong Kong
February Mutambo uye Zviitiko Roundup